Golaha Shacabka oo Mooshin u gudbiyay Gudoomiyaha Golaha - Awdinle Online
Golaha Shacabka oo Mooshin u gudbiyay Gudoomiyaha Golaha
Xildhibaannada Golaha Shacabka BFS ayaa maanta kulan ka yeeshay Qoondada haweenka ay ku leeyihiin labada Gole ee Baarlaanka Soomaaliya, maadaama dalka uu guda galayo doorashada 2020/2021.
Kuraasta Xildhibaannada waxaa dib loogu celinayaa Beelaha leh si doorasho markale ay usoo galaan mudanayaasha afarta sano ku fadhiso, iyo xubno cusub oo ku guda jira loolanka la xiriira hanashiisa.
Guddoonka Golaha Shacabka waxaa maanta loo gacan geliyay Mooshin ay ku saxiixan yihiin in ka badan 130-Xildhibaan, kuwaa oo soo jeediyay in Xildhibaannada Haweenka ah kaliya kuraastooda ay u tartamaan dumarka oo kaliya si loo xaqiijiyo 30%.
Xildhibaannada Haweenka ah ee ku jira labada Gole ee BFS waxa ay ka walwalsan yihiin in la duudsiyo saamiga laga siiyay tirada Baarlamaanka oo ah 30% waana tan keentay in ay dood ka furaan inta lagu guda jiro doodda ku saabsan ka hadlidda xuquuqdooda.
Previous articleMa Taqaanaa 10-dal ee dadkooda Qaxeen Soomaaliyana Qayb Ka Tahay dadka Ka Barakay dhulkooda,
Next articleMadaxweyne Deni oo ku amray Maamulka Gobalka Bari inay si Deg deg ah u xaliyaan cabashada shacabka.